Cryptotrading - Entry na Wepụ Points - Blockchain News
Mgbe ọ bụ mma ịzụta a cryptocurrency? Na mgbe na-ere? Ajụjụ ndị a dị n'ebe dị anya n'ebe na-abaghị uru. Ma ị na-ekpuchi ndị na-emekarị kpamkpam ma ị ga na-atụ uche gị uru na a ọnụ ke uru nke akpan owo-adabere kpam na n'ụzọ kwesịrị ekwesị họọrọ ntinye na ụzọ ọpụpụ ihe. Iji malite, ka anyị leba anya mfe nkọwa nke na ntinye na ụzọ ọpụpụ ihe dabeere na nkwado na-eguzogide edoghi.
Anyị na-ama kwuru na mgbe ewu ihe uptrend akara, anyị na-adabere isi ihe abụọ nke price mgbochi na sikwuo na-emekarị nke-atọ. Nke a atọ mgbe ga-kacha mma oge ịzụta ma ọ bụ tinye ahịa. A ọnọdụ yiri nke ahụ, a hụrụ na a n'ala-emekarị, naanị ma e wezụga n'ihi ebe a, nke-atọ aka na price akara eje ozi dị ka unequivocal mgbaàmà na-ere akpan owo ma ọ bụ wepuÚ ahịa.
Irè oge nke abanye ahịa bụkwa a price ezumike site ndị na-eguzogide larịị mgbe ọkụ nke uptrend naanị amalite ịzụlite. Iji belata ihe ize ndụ, na ọnọdụ dị otú ahụ ọ bụ ihe amamihe na-abanye ahịa site ịgba iwu mgbe na-akwụ ụgwọ pụrụ iche anya ka mgbazi zones.
Ọ kwesịrị iwere dị ka a na-achị na a edozi ojuju adịkarịghị karịa 38% nke ikpeazụ dechara dobe, na mgbe na, elu price na-anọkarị mgbe. Ọ bụ nke a na mpaghara, bounded site ikpeazụ vertex na a n'ókè nke 38%, na bụ oge dị mma ịzụta.
Ọ bụrụ na e doro anya nloghachi emekarị na ndị ahịa na-ada ada, ihe na chaatị nwere ike na-egosipụta dị ka a itunanya nke support akara, akpan owo ga-eresị ya na a kacha nta mgbapu n'elu a akara. Ọ bụghị ike na-enwetaghị ndị dị otú ahụ a oge ná mmalite nkebi nke a downtrend.
Ọzọ atụmatụ maka abanye ahịa na-ịzụ ma ọ bụ na-ere na a countertrend. Ọtụtụ mgbe, na-arịgo countertrend fixes ibu dị n'azụ na-emekarị akara, mbịne ya na-eguzogide akara n'ime a support akara. Mgbe price emetụ a akara, ọ bụ oge na-etinye ego na akpan owo.
Na-abụghị ọnọdụ, mgbe countertrend etịbede support akara, ọ ghọọ a na-eguzogide akara, na karịsịa ma ọ bụrụ na mgbazi zones nọ nso, ohere nke a nke ọma ụzọ ọpụpụ si ahịa na-abawanye.
Ndị a ụzọ nwere pụtara onwe-ha na a akpọ ebughi emekarị, ma na e nwere ụzọ na-eme ka ego corridors nke ikwu kwụsie ike. Mpụta na-emekarị nwere ike mee ka uru Fans nke obere- na-ajụ-okwu ahia. Iji mata ezigbo ebe zuo ma ọ bụ ire ere, dabere na ya kee ihe ewepụghị emekarị mpaghara site a kwụ n'ahịrị na n'etiti. A ịrị elu price n'elu a akara bụ a mgbaàmà ịzụta; a dobe n'okpuru bụ maka ire. Nke a na Usoro-adabere na ahịa si ọchịchọ na-eto eto ma ọ bụ daa mgbe agafe ókè-ala na-ekewa ya na ọkara.
Ọ bụrụ na ị na-ama-mụtara otú iji chọpụta otú a ozi ọma burukwa na-emetụta uru nke a ego, i nwere ike na-agbalị tinye ahịa dabeere na ọhụrụ ozi ọma. The subtlety n'ebe a bụ na ahịa ọ bụghị mgbe nile na-eme unambiguously ka ndị ụwa ihe, na anyị maara na a ọtụtụ ihe atụ mgbe investors na-ere ha Bitcoins enweghị na-eche-eto ngwa ngwa n'ihi na dị nnọọ awa ole na ole na-adịghị mma kaadị ozi ọma si na China. We will discuss the intricacies of trading on the news separately. Maka ugbu a, Otú ọ dị, anyị nwere ike ikwu na-eme na kọwara usoro. Ịkọrọ gị ihe ịga nke ọma na anyị na-eso ndị update nke “Tụlee a” ngalaba.
Liechtenstein si Bank Frick na-enye kpọmkwem investments na cryptocurrencies
Malite site Feb 28...
Previous Post:Browser dabeere na Ngwuputa na-aghọ ndị ọzọ ọsọ
Next Post:Belarus na eze legalizes niile kaadị metụtara azụmahịa na trading
Fake Ray Ban Wayfarers kwuru:
April 11, 2018 na 9:56 PM
Ka 12, 2018 na 8:14 AM
Ka 22, 2018 na 4:38 PM
Ka 29, 2018 na 11:33 AM
June 2, 2018 na 2:57 PM
I’ve been surfing on-line more than three hours these days, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty value sufficient for me. N'uche nke m, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will probably be much more helpful than ever before.
September 4, 2018 na 12:03 PM
September 14, 2018 na 2:13 PM